ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ညွှန်းပြသခဲ့တဲ့ Rolls-Royce Phantom Limelight Collection - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Features > Cars > Luxury Cars > ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ညွှန်းပြသခဲ့တဲ့ Rolls-Royce Phantom Limelight Collection
ကားဆိုတာလက်ရှိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ သာမန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ ယူဆရ တဲ့ထိအောင် ကားထုတ်လုပ်သူတွေက သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း အဲဒီလိုပေါများနေတဲ့ သူလိုကိုယ်လိုကားတွေထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးထိပ်တန်းကားတွေက ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေမဆို ရှားပါးပြီးကောင်းမွန်လွန်းရင် တန်ဖိုးရော၊ဂုဏ်သတင်းပါကြီးတတ်ကြစမြဲပါ။ဒီလိုတန် ကြေးကြီးကားတွေစာရင်းမှထိပ်တန်းကနေအမြဲဦးဆောင်နေတာကတော့ Rolls-Royce Motor Cars တွေပဲဖြစ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျော်ကြားမှု၊အဆင့်အတန်း၊အရည်အသွေးတွေကို ရာစုနှစ်နီးပါးထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြပါ တယ်။ Rolls-Royce ကားတည်ဆောက်ခြင်းအနုပညာကိုတစ်ဖက်ကမ်း တတ်မြောက်ထားကြသူတွေဆို တော့ သူတို့ရဲ့ကားတွေကို ရောင်းရတိုင်းဘယ်တော့မှ ပေါပေါလောလောမထုတ်ပါဘူး။အကန့်အသတ်နဲ့ သာထုတ် လုပ်တာဆိုတော့ ထုတ်သမျှကားတွေတိုင်းက ဈေးကြီးမယ်၊ ကောင်းမယ်၊ ရှားပါးမယ်။ ဒီအချက် တွေကြောင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေအတွက် သီးသန့်အဆင်တန်ဆာတစ်ခုဖြစ်လာကြပြီး Rolls-Royce ပိုင်ဆိုင်သူတိုင်း ကိုတကယ့်ဂရိတ်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကို ဆက်ပြောရရင်ဖြင့် ၁၉၂၅ ကတည်း က Phantom ဆိုပြီး စထုတ်လာခဲ့တာအခုဆို Rolls-Royce Phantom VIII မျိုးဆက် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ပြီးတော့ လည်း မျိုးဆက်တိုင်းမှာ Limited Edition တွေအများအပြားထုတ်လုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အခုမျက်နှာ ဖုံးရှင်အ ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့ Rolls-Royce Phantom က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းက အစီးရေ ၂၅ စီးသာထုတ်ခဲ့တဲ့ Limelight Collection ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Limelight Collection ဆိုတာ
ဗြိတိန်အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးကို ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ခုဆိုလည်းမမှားနိုင်ပါဘူး။ ဒီ Limelight Collection ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Goodwood မှာဖန်တီးတည် ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဆင်မြင့်ထက်ပေါ်မှာအားလုံးရဲ့မျက်စိကြစရာ ကားတစ်စီးအဖြစ်အသက်သွင်းတည် ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Super-luxury motor ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Limelight Collection မှာဆိုရင် chassis platform, body, interior တွေအားလုံးကို Rolls-Royce ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးသောနည်းပညာတွေနဲ့ အညီထုတ်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘော်ဒီကိုတော့ aluminum တွေအများဆုံးသုံးပြီးတည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ။ Body, paint, wood ,leather work နဲ့ customize တွေကို Goodwood မှာပဲ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ The plant contains the paint shop, body shop, leather shop, woodworking shop, assembly line, and executive offices under one roof. There are only three robots in the factory. ဒီစက်ရုံမှာဆိုရင် စက်ရုပ် ၃ ခုပဲထားရှိပြီး ဒါတွေကို ဆေးမှုတ်တဲ့နေရာမှာပဲသုံးပြီး ကျန်တာတွေကိုတော့ လူတွေကပဲ Hand Made တွေနဲ့အတိအကျအသေးစိတ်ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆေးပိုင်းမှာလည်း Rolls-Royce tradition အတိုင်3းmm (0.1 in) အတိုင်းအတာကနေအစအနုစိတ်ကိုအတိအကျဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘော်ဒီပိုင်းမှာသုံးတဲ့ aluminum ကိုတော့ hydroelectric power သုံးပြီး နော်ဝေးနိုင်ငံမှာဖန်တီးသလို ပုံစံကိုတော့ ဒိန်းမတ်မှာ စက်တွေသုံးပြီးတည်ဆောက်ကာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂျာမနီမှာလက်ဂဟေနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားတွေမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းပါဝင်မှုအနေနဲ့ instrument panel (ဒိုင်ခွက်)ထဲမှာ အခြားကားတွေမှာလို rpm ကိုဖော်ပြပေးတဲ့ tachometer မပါဘဲ နာရီတွေမှာသုံးတဲ့ power reserve dial ပါဝင်ပြီး အင်ဂျင်ရဲ့ပါဝါကို တစ်နေ့တာအတွက် ဘယ်လောက်သုံးစွဲသင့်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ဖော်ပြမှုတွေပါရှိပါတယ်။ နောက် တစ်ချက်ကတော့ နောက်တံခါးကပတ္တာထည့်ထားတဲ့ ရင်ခွဲတံခါးတွေဖြစ်ပြီး coach doors လို့နာမည်ပေး ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နောက်ထိုင်ခုံပုံစံတွေက နောက်တံခါးလက်ကိုင်တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပြီး ခလုတ်တွေက C-pillars မှာပါရှိပြီး hydraulic motors တွေနဲ့တံခါးကိုပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တံခါး တွေက စေ့ရုံပဲပိတ်ထားရုံနဲ့အလိုအလျောက်လော့ခ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တံခါးတွေကို မပိတ်ဘဲ ကားမောင်းမယ်ဆိုရင် ဘရိတ်အော်တိုနင်းထားပြီး ကားကိုမောင်းလို့မရမယ့် စနစ်တွေလည်းပါပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တံခါးဘောင်တွေထဲမှာလည်း Rolls-Royce တံဆိပ်ပါတဲ့ လျှင်မြန်စွာခြောက်သွေ့နိုင်တဲ့ teflon coating သုတ်ထားတဲ့ထီးတွေထည့်သွင်းထားလို့ ထီးအတွက်နေရာယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက Rolls-Royce ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ကားရှေ့ဦးမှာပါတဲ့ Flying Lady အရုပ်တွေက သူခိုးတွေ၊ လက်ဆော့ တတ်တဲ့လမ်းလမ်းလာတွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြန်ကျုံ့နိုင်တဲ့ automatic electronic စနစ်ကို သုံးထားလို့ ဘော်ဒီထဲကိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ “RR” လိုဂိုပါတဲ့ဘီး ပင်မ နေရာက ဘီးလည်နေရင်တောင်လိုက်မလည်ဘဲ အမြဲတမ်းအတည့်နေရာမှာပဲရှိအောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါ တယ်။
စစ်မှန်တဲ့ Luxury ကားတစ်စီး
ဒီကားက လူတစ်စီးချင်းစီအတွက် လိုအပ်တဲ့သက်သောင့်သက်သာရှိစေမယ့်အရာတွေကို အသေးစိတ်ထည့် သွင်းပေးထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ Luxury ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းထိုင်ခုံတွေက လက်ချုပ်လည် သာတွေဖြစ်ပြီး လေယာဉ်သုံး flat-bed seat တွေကိုသုံးထားပါတယ်။ ဒီထိုင်ခုံတွေကလည်း ဇိမ်ကျမှုရော၊ ကျန်းမာရေးအရရော၊လုံခြုံရေးအရပါအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါ တယ်။ နောက်ခုံတွေက ကျန်းမာရေးအရ ထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ ခေါင်းမှီက ၂၇ ဒီဂရီအနေအထား၊ ခြေသ လုံးအထိခန္ဓာကိုယ်ဟန်က ၆၈ ဒီဂရီအနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ထိုင်ခုံအ ရောင်တွေက စိန်ပွင့်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေပါတဲ့ အဖြူရောင်တွေဖြစ်ပြီး အတွင်းအရောင်က Navy Blueနဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ Piano Seashell specific တွေနဲ့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနုစိတ်ဖန်တီးမှုတွေပါတဲ့ ဒီကားမှာ သစ်အယ်သီးပင်ရဲ့အသားတွေအပါအဝင် ကျွန်းနဲ့ပါဖန်တီးထားတာမို့ အရမ်းကို Luxury ဆန်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး အတွင်းခန်းအမိုးပေါ်က လက်ရာမြောက်ဖန်တီးထားတဲ့ အာကာသပုံစံဖန်တီးထားသလို ထိန်းချုပ်မှု ခလုတ်တွေကလည်း အခြားသောကားတွေထက်ပိုပြီးလက်ရာမြောက်သလို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရတာလဲ လူရဲ့ စိတ်ကိုသိနေသလိုပါပဲ။ Pointer လို Center ကထိန်းချုပ်မှုပုံစံတွေတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုး သား၊အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးပါတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ထည့်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်မွှေးရနံ့ ၃ မျိုးပါတဲ့ အံဝှက်တွေ၊ ထည့်စရာတွေကို အတွင်းခန်းမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ညာပေါ်ဘက်အိတ်ထဲမှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် ရေမွှေးထည့်စရာနေရာနဲ့အတူ အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများအတွက် နာရီဒါမှမဟုတ် လက်ဝတ်ရတနာ ထည့်စရာအံဝှက် ၂ နေရာစီပါပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်မှာလည်း Ladies’ နဲ့ Gentleman’s တွေအတွက် Accessory Z-Boxes တွေထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အသံစနစ်နဲ့ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ navigation system, power sunroof, upgraded leather upholstery, နောက်ကြည့်ကင်မရာ, rear-seat DVD entertainment system, 15-speaker Lexicon Logic7 premium sound system, 8-disc CD changer, 18-way power front seats, 16-way power rear seats, heated and cooled cup holders, rear-seat tables, ပြင်ပအပူချိန်ညွှန်ပြမှု, အပူပေးစနစ်ပါပြီး သစ်သား၊လည်သာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားကာ radio, climate, and navigation controls ပါတဲ့စတီယာရင်၊ power နဲ့အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နောက်တံခါး, wireless headphones, iPod adapter, ရေခဲသေတ္တာ, 5-zone climate controls ပါတဲ့ air conditioning စတဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။
ဒီကားက 4-door saloon ပုံစံဖြစ်ပြီး 6.75 L twin-turbocharged V12 (petrol) ဖြစ်ပြီး 8-speed automatic သုံးဂီယာစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Suspension စနစ်ကလည်း ရှေ့နောက်ကို air springs and electronically controlled dampers တွေသုံးထားပါတယ်။ စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကတော့ 454 hp @5350 rpm ဖြစ်ပြီး Torque က 720 N⋅m (531 lb⋅ft)@3500 ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့တန်ဖိုးကလည်း မူရင်းဈေးကိုကဒေါ်လာ ၆သိန်းခွဲဆိုတော့ ဒီမှာစီးဖို့ဆို သိန်းကိုသောင်းနဲ့ချီကုန်ကျမှာပါ။
Engine – 6.75 L twin-turbocharged V12 (petrol)
Transmissions – 8-Speed Auto
Maximum Power (HP/rpm) – 454 hp /5350 rpm
Maximum Torque (Nm/rpm) – 720 N⋅m (531 lb⋅ft)/3500
Top speed (km/h) – 250 km/h
Acceleration (0-62mph) – 5.3 seconds
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကားတဈစီးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ဖျောညှနျးပွသခဲ့တဲ့ Rolls-Royce Phantom Limelight Collection
ကားဆိုတာလကျရှိတိုးတကျပွောငျးလဲလာတဲ့ခတျေကွီးထဲမှာ သာမနျအသုံးအဆောငျပစ်စညျးတဈခုလို့ ယူဆရ တဲ့ထိအောငျ ကားထုတျလုပျသူတှကေ သူ့ထကျငါအပွိုငျအဆိုငျထုတျလုပျရောငျးခလြာကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လညျး အဲဒီလိုပေါမြားနတေဲ့ သူလိုကိုယျလိုကားတှထေဲမှာမှ အကောငျးဆုံးထိပျတနျးကားတှကေ ရှိနပေါတယျ။ ဘယျလိုအရာတှမေဆို ရှားပါးပွီးကောငျးမှနျလှနျးရငျ တနျဖိုးရော၊ဂုဏျသတငျးပါကွီးတတျကွစမွဲပါ။ဒီလိုတနျ ကွေးကွီးကားတှစောရငျးမှထိပျတနျးကနအေမွဲဦးဆောငျနတောကတော့ Rolls-Royce Motor Cars တှပေဲဖွဈ ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကြျောကွားမှု၊အဆငျ့အတနျး၊အရညျအသှေးတှကေို ရာစုနှဈနီးပါးထိနျးသိမျးလာခဲ့ကွပါ တယျ။ Rolls-Royce ကားတညျဆောကျခွငျးအနုပညာကိုတဈဖကျကမျး တတျမွောကျထားကွသူတှဆေို တော့ သူတို့ရဲ့ကားတှကေို ရောငျးရတိုငျးဘယျတော့မှ ပေါပေါလောလောမထုတျပါဘူး။အကနျ့အသတျနဲ့ သာထုတျ လုပျတာဆိုတော့ ထုတျသမြှကားတှတေိုငျးက ဈေးကွီးမယျ၊ ကောငျးမယျ၊ ရှားပါးမယျ။ ဒီအခကျြ တှကွေောငျ့ ခမျြးသာကွှယျဝသူတှအေတှကျ သီးသနျ့အဆငျတနျဆာတဈခုဖွဈလာကွပွီး Rolls-Royce ပိုငျဆိုငျသူတိုငျး ကိုတကယျ့ဂရိတျတှအေဖွဈသတျမှတျလာကွပါတယျ။ သူ့အကွောငျးကို ဆကျပွောရရငျဖွငျ့ ၁၉၂၅ ကတညျး က Phantom ဆိုပွီး စထုတျလာခဲ့တာအခုဆို Rolls-Royce Phantom VIII မြိုးဆကျ တိုငျခဲ့ပါပွီ။ ပွီးတော့ လညျး မြိုးဆကျတိုငျးမှာ Limited Edition တှအေမြားအပွားထုတျလုပျခဲ့ပွနျပါတယျ။ အခုမကျြနှာ ဖုံးရှငျအ ဖွဈပါဝငျလာတဲ့ Rolls-Royce Phantom က ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ တုနျးက အစီးရေ ၂၅ စီးသာထုတျခဲ့တဲ့ Limelight Collection ပဲဖွဈပါတယျ။
Limelight Collection ဆိုတာ
ဗွိတိနျအငျဂငျြနီယာတှရေဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးနဲ့ အနုပညာဖနျတီးမှုဆိုငျရာ အမွငျ့ဆုံးကို ပွသနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျ တဈခုဆိုလညျးမမှားနိုငျပါဘူး။ ဒီ Limelight Collection ကိုအင်ျဂလနျနိုငျငံ Goodwood မှာဖနျတီးတညျ ဆောကျခဲ့တာဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဆငျမွငျ့ထကျပျေါမှာအားလုံးရဲ့မကျြစိကွစရာ ကားတဈစီးအဖွဈအသကျသှငျးတညျ ဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ Super-luxury motor ကားတဈစီးဖွဈတဲ့ Limelight Collection မှာဆိုရငျ chassis platform, body, interior တှအေားလုံးကို Rolls-Royce ရဲ့ကိုယျပိုငျအကောငျးဆုံးသောနညျးပညာတှနေဲ့ အညီထုတျလုပျထားခဲ့ပါတယျ။ ဘျောဒီကိုတော့ aluminum တှအေမြားဆုံးသုံးပွီးတညျဆောကျထားခဲ့တာပါ။ Body, paint, wood ,leather work နဲ့ customize တှကေို Goodwood မှာပဲ ထုတျလုပျတာဖွဈပါတယျ။ The plant contains the paint shop, body shop, leather shop, woodworking shop, assembly line, and executive offices under one roof. There are only three robots in the factory. ဒီစကျရုံမှာဆိုရငျ စကျရုပျ ၃ ခုပဲထားရှိပွီး ဒါတှကေို ဆေးမှုတျတဲ့နရောမှာပဲသုံးပွီး ကနျြတာတှကေိုတော့ လူတှကေပဲ Hand Made တှနေဲ့အတိအကအြသေးစိတျဖနျတီးတညျဆောကျခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဆေးပိုငျးမှာလညျး Rolls-Royce tradition အတိုငျ3းmm (0.1 in) အတိုငျးအတာကနအေစအနုစိတျကိုအတိအကဖြွဈအောငျ လုပျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဘျောဒီပိုငျးမှာသုံးတဲ့ aluminum ကိုတော့ hydroelectric power သုံးပွီး နျောဝေးနိုငျငံမှာဖနျတီးသလို ပုံစံကိုတော့ ဒိနျးမတျမှာ စကျတှသေုံးပွီးတညျဆောကျကာ နောကျဆုံးမှာတော့ ဂြာမနီမှာလကျဂဟနေဲ့တညျဆောကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီကားတှမှော ပွိုငျဘကျကငျးပါဝငျမှုအနနေဲ့ instrument panel (ဒိုငျခှကျ)ထဲမှာ အခွားကားတှမှောလို rpm ကိုဖျောပွပေးတဲ့ tachometer မပါဘဲ နာရီတှမှောသုံးတဲ့ power reserve dial ပါဝငျပွီး အငျဂငျြရဲ့ပါဝါကို တဈနတေ့ာအတှကျ ဘယျလောကျသုံးစှဲသငျ့သလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးတဲ့ ဖျောပွမှုတှပေါရှိပါတယျ။ နောကျ တဈခကျြကတော့ နောကျတံခါးကပတ်တာထညျ့ထားတဲ့ ရငျခှဲတံခါးတှဖွေဈပွီး coach doors လို့နာမညျပေး ထားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ နောကျထိုငျခုံပုံစံတှကေ နောကျတံခါးလကျကိုငျတှနေဲ့ဆကျစပျမှုရှိပွီး ခလုတျတှကေ C-pillars မှာပါရှိပွီး hydraulic motors တှနေဲ့တံခါးကိုပိတျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တံခါး တှကေ စရေုံ့ပဲပိတျထားရုံနဲ့အလိုအလြောကျလော့ချကသြှားမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ တံခါးတှကေို မပိတျဘဲ ကားမောငျးမယျဆိုရငျ ဘရိတျအျောတိုနငျးထားပွီး ကားကိုမောငျးလို့မရမယျ့ စနဈတှလေညျးပါပါသေးတယျ။ နောကျပွီးတော့ တံခါးဘောငျတှထေဲမှာလညျး Rolls-Royce တံဆိပျပါတဲ့ လြှငျမွနျစှာခွောကျသှနေို့ငျတဲ့ teflon coating သုတျထားတဲ့ထီးတှထေညျ့သှငျးထားလို့ ထီးအတှကျနရောယူမှာမဟုတျပါဘူး။ နောကျတဈခုက Rolls-Royce ရဲ့အမှတျတံဆိပျဖွဈတဲ့ ကားရှေ့ဦးမှာပါတဲ့ Flying Lady အရုပျတှကေ သူခိုးတှေ၊ လကျဆော့ တတျတဲ့လမျးလမျးလာတှရေဲ့ရနျကနကောကှယျဖို့အတှကျ ပွနျကြုံ့နိုငျတဲ့ automatic electronic စနဈကို သုံးထားလို့ ဘျောဒီထဲကိုထညျ့သှငျးထားနိုငျပါသေးတယျ။ နောကျဆုံးတဈခုကတော့ “RR” လိုဂိုပါတဲ့ဘီး ပငျမ နရောက ဘီးလညျနရေငျတောငျလိုကျမလညျဘဲ အမွဲတမျးအတညျ့နရောမှာပဲရှိအောငျဖနျတီးထားတာဖွဈပါ တယျ။
စဈမှနျတဲ့ Luxury ကားတဈစီး
ဒီကားက လူတဈစီးခငျြးစီအတှကျ လိုအပျတဲ့သကျသောငျ့သကျသာရှိစမေယျ့အရာတှကေို အသေးစိတျထညျ့ သှငျးပေးထားတဲ့ စဈမှနျတဲ့ Luxury ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ။ အတှငျးခနျးထိုငျခုံတှကေ လကျခြုပျလညျ သာတှဖွေဈပွီး လယောဉျသုံး flat-bed seat တှကေိုသုံးထားပါတယျ။ ဒီထိုငျခုံတှကေလညျး ဇိမျကမြှုရော၊ ကနျြးမာရေးအရရော၊လုံခွုံရေးအရပါအကောငျးဆုံးဖွဈစမေယျ့အနအေထားမြိုးဖွဈအောငျဖနျတီးပေးထားပါ တယျ။ နောကျခုံတှကေ ကနျြးမာရေးအရ ထောကျခံခကျြပေးထားတဲ့ ခေါငျးမှီက ၂၇ ဒီဂရီအနအေထား၊ ခွသေ လုံးအထိခန်ဓာကိုယျဟနျက ၆၈ ဒီဂရီအနအေထားမြိုးဖွဈအောငျပွုလုပျထားပါတယျ။ ထိုငျခုံအ ရောငျတှကေ စိနျပှငျ့ပုံစံဒီဇိုငျးတှပေါတဲ့ အဖွူရောငျတှဖွေဈပွီး အတှငျးအရောငျက Navy Blueနဲ့ဒီဇိုငျးကိုတော့ Piano Seashell specific တှနေဲ့ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အနုစိတျဖနျတီးမှုတှပေါတဲ့ ဒီကားမှာ သဈအယျသီးပငျရဲ့အသားတှအေပါအဝငျ ကြှနျးနဲ့ပါဖနျတီးထားတာမို့ အရမျးကို Luxury ဆနျသှားပါလိမျ့မယျ။ နောကျပွီး အတှငျးခနျးအမိုးပျေါက လကျရာမွောကျဖနျတီးထားတဲ့ အာကာသပုံစံဖနျတီးထားသလို ထိနျးခြုပျမှု ခလုတျတှကေလညျး အခွားသောကားတှထေကျပိုပွီးလကျရာမွောကျသလို ကိုငျတှယျထိတှရေ့တာလဲ လူရဲ့ စိတျကိုသိနသေလိုပါပဲ။ Pointer လို Center ကထိနျးခြုပျမှုပုံစံတှတေောငျပါဝငျပါတယျ။ ပွီးတော့ အမြိုး သား၊အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အရေးပါတဲ့ အသုံးအဆောငျတှကေို ထညျ့ဖို့ ကိုယျပိုငျမှေးရနံ့ ၃ မြိုးပါတဲ့ အံဝှကျတှေ၊ ထညျ့စရာတှကေို အတှငျးခနျးမှာထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ ညာပျေါဘကျအိတျထဲမှာဆိုရငျ ကိုယျပိုငျ ရမှေေးထညျ့စရာနရောနဲ့အတူ အမြိုးသားမြား၊အမြိုးသမီးမြားအတှကျ နာရီဒါမှမဟုတျ လကျဝတျရတနာ ထညျ့စရာအံဝှကျ ၂ နရောစီပါပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဘယျဘကျမှာလညျး Ladies’ နဲ့ Gentleman’s တှအေတှကျ Accessory Z-Boxes တှထေညျ့သှငျးထားပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ အသံစနဈနဲ့ညှနျကွားနိုငျတဲ့ navigation system, power sunroof, upgraded leather upholstery, နောကျကွညျ့ကငျမရာ, rear-seat DVD entertainment system, 15-speaker Lexicon Logic7 premium sound system, 8-disc CD changer, 18-way power front seats, 16-way power rear seats, heated and cooled cup holders, rear-seat tables, ပွငျပအပူခြိနျညှနျပွမှု, အပူပေးစနဈပါပွီး သဈသား၊လညျသာတှနေဲ့ ဖနျတီးထားကာ radio, climate, and navigation controls ပါတဲ့စတီယာရငျ၊ power နဲ့အဖှငျ့အပိတျလုပျနိုငျတဲ့ နောကျတံခါး, wireless headphones, iPod adapter, ရခေဲသတ်ေတာ, 5-zone climate controls ပါတဲ့ air conditioning စတဲ့ ဇိမျခံပစ်စညျးတှပေါဝငျပါတယျ။
ဒီကားက 4-door saloon ပုံစံဖွဈပွီး 6.75 L twin-turbocharged V12 (petrol) ဖွဈပွီး 8-speed automatic သုံးဂီယာစနဈဖွဈပါတယျ။ Suspension စနဈကလညျး ရှနေ့ောကျကို air springs and electronically controlled dampers တှသေုံးထားပါတယျ။ စှမျးအငျထှကျရှိမှုကတော့ 454 hp @5350 rpm ဖွဈပွီး Torque က 720 N⋅m (531 lb⋅ft)@3500 ဖွဈပါတယျ။ သူ့တနျဖိုးကလညျး မူရငျးဈေးကိုကဒျေါလာ ၆သိနျးခှဲဆိုတော့ ဒီမှာစီးဖို့ဆို သိနျးကိုသောငျးနဲ့ခြီကုနျကမြှာပါ။
Tags Car ReviewcarsfeaturedLuxury carRolls Royce
ရှေးမူမပျက်ဖန်တီးထုတ်လုပ်လာမည့် 2020 Toyota Land Cruiser ၏အထူးထုတ် Heritage Edition
V 10 Engine ပါဝင်လာသည့် Lamborghini Hurancan Evo